शहिदहरुले देखाएको बाटो: सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङ मात्र हो ?
तर आज शहिद सप्ताह मनाईरहँदा पनि ती महान् ज्ञात अज्ञात शहिदहरुले देखाएको बाटोमा मुलुकको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ त ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा भईरहेको छ । किनकी नेपालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र स्थापना हुनुपर्दछ भनी शहिदहरुले जसरी आफ्नो प्राणको आहुती गरे, तद्अनुरुप नेपालको राजनीति सञ्चालन भईरहेको वर्तमान अवस्था छैन ।
...त्यसपछि राता मान्छेका मुटुहरुले प्रशंसा गर्न थाल्नेछन
नेपालीको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भनौं प्रधानमन्त्रीको मृगौला अस्वस्थ छ । हप्तामा दुई पटक डायलसिस गरेर पनि प्रधानमन्त्री देश हाँकिरहनु भएको छ । मुटु स्वस्थ्य र बलियो भएकै कारण मृत्युलाई धक्का मुक्का गर्दै बारम्बार कालको बाटो छेकेर प्रधानमन्त्री जीवित हुनुहुन्छ । यो नेपालीको सौभाग्य हो ।
कर्तव्यच्यूत कांग्रेस नेतृत्व र सापकोटाको चरणमा समर्पित आदर्श
दूर्भाग्य आफूलाई संसदीय राजनीतिको मसीहा, नेपालमा प्रजातन्त्रको एक मात्र रक्षक, विधि–कानून, संविधानवाद, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, अहिंसात्मक राजनीतिको पक्षपाती दावी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले पनि सापकोटाको चरणमा आफूलाई समर्पण गर्यो ।
सभामुखमा हत्या आरोपी अग्नि सापकोटा, प्रधानमन्त्री ओली र मृत्युशैयामा विधिको शासन
पूर्वएमालेमा रहँदा माओवादीको हत्या हिंसायुक्त राजनीतिको पटाक्षेप गर्दै धाराप्रवाह आलोचना गरेकै कारण ओलीले पार्टी सत्ता हत्याएको जगजाहेर छ । आज सर्वशक्तिमान शासकको पगरी गुँथेपछि ओली झन् एकपछि अर्को नागरिकलाई खिस्याउने निर्णय किन गर्दैछन् ? कुन बाध्यता छ उनीमाथि मानवअधिकारको चरम ज्यादती र उल्लंघन गरेका पात्रहरुलाई काखी च्यापेर हिंड्नुपर्ने ? ओली मात्र होइन यस प्रकरणमा माधव नेपाललगायतका नेता जो सापकोटालाई सभामुख बनाउन ल्याप्चे सदरमा उभिएका छन्, तिनले पनि कठघरामा जवाफ दिनैपर्छ ।
मलाई पनि मान्छे हुने अवसर देऊ भगवान !
रंगभेद हटाउन दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मन्डेला २७ वर्ष जेलको पाहुना बने । दासदासी प्रथा एवं कमारा कमारी उन्मुलन गर्न १६ औं अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन १८६३ मा मात्रै सफल भएका थिए । त्यो समय व्यतित भएर पनि संसार कंहाबाट कहाँ पुगिसक्यो ।
तिम्रा सन्तान कालगतीले मर्दा तिम्लाई कस्तो पीडा हुँदो रहेछ ? एउटा निहत्था निरापराधी पति, बाबु, छोरा मारिँदा त्यो घरमा कस्तो बितेको होला ? कसरी कटे होलान् जुग जस्ता बनेका दिनरात र वर्षहरु ? मुक्ति सरको धर्मपत्नी, तिनका सन्तान आज पनि यो तस्वीर देख्दा कुन मनोदशामा पर्दा होलान् ? मुक्ति सरलाई मार्ने फर्मान् हामीले जारी गरेका थिएनौं भनेर गिड्गिडाएको पनि देखे/सुनेकै हो । त्यसो हो भने मुक्ति सरकी पत्नी र तिनका सन्तानका अघिल्तिर उभिएर माफी किन माग्दैनौं ? साहस छ तिमीमा ?
जुनसुकै खालको पनि तानासाही नेपालीले खप्दैनन्
अहिले केही समयदेखिको चर्चाको विषय बनेको सूचना प्रविधि विधेयक हो, यसभन्दापहिले मेडिया काउन्सिल विधेयकको चर्चा थियो, विज्ञापनसम्बन्धी ऐनको चर्चा थियो र सबैभन्दा बढी गुठी विधेयकले पाएको थियो जुन अहिले स्थगित नै भएको छ ।
यसकारण सभामुखमा शिवमाया अयोग्य ! राजीनामा दिएर बचाइदेऊ सामन्ती विरासत
माननीय डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेज्यू, यो तपाईंलाई नमागेको सल्लाह हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चाहना पूरा गर्न तपाईंले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, तपाईं आफैंलाई यो पदमा पुर्‍याउने नेता र पार्टीको निर्देशन नै मान्नुहुन्न । तपाईंले कुरा नै बुझ्नु भैरहेको छैन !
ओलीको कम्युनिष्ट सत्ता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी बन्दै गरेको ‘हिटलरी ग्यास च्याम्बर’
सूचना प्रविधि विधेयक, विज्ञापन ऐन, मिडिया काउन्सिललगायत विषय जसमा सञ्चार माध्यमको घाँटीमा सुर्केनी लगाइएको छ । सरकारले चाहेझै यी कानुन कार्यान्वयनमा जाँदा सञ्चारका दृष्टिले नेपाल हिटलरको ग्यास च्याम्बरका रुपमा परिणत हुने निश्चित छ ।
अस्पतालले उपचार गर्न नमानेपछि एक महिलाको मृत्यु
जापानमा आपतकाल घोषणा, १० खर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था